Ogaden News Agency (ONA) – South Sudan oo Codsatay in Wadahadalka loo Waraajiyo Kenya, Itobiyana ku Eedeysay in aanay Dhedhexeed ka ahayn
South Sudan oo Codsatay in Wadahadalka loo Waraajiyo Kenya, Itobiyana ku Eedeysay in aanay Dhedhexeed ka ahayn
Posted by ONA Admin	/ October 4, 2014
Dawladda South Sudan ayaa gaadhsiiyay caalamka in wadahadalkii u dhexeeyay labada garab ee ku dagaalamaya xukunka oo wadahadal uu uga socday Adis Ababa loo wareejiyo Kenya, sababtoo ah bay yidhaahdeen Itobiya dhex-dhexaad kama ah dagaalka sokeeye ee ka socda dalkooda, isla mar ahaantaana ma doonayso inuu joogsado dagaalka.
Xukuumadda Suudaanta Koonfur ayaa dalbatay in wadahadlka loo wareejiyo Kenya oo uu hogaamiyo Jeneraal Lazarus Sumbeiywo. Wasiirka Warfaafinta South Sudan Mr. Michael Makuei Lueth ayaa ka biyadiiday habka ay Itobiya wax u wado oo yidhi Seyoum Mesfin uma qalmo hawshan, waxaana kaga mudan Jenenka oo gudoominayay wadahadalkii ka qalafsanaa ee u dhexeeyay dagaalayahankii SPLA iyo Dawladda Sudan isagoo ku dhameeyay isafgarad iyo in afti laga qaado shacabka Koonfurta Sudan, ayuu yidhi wasiirka. Wuxuu raaciyay;
“In Jen. Lazarus la hoos geeyo shaqsi aan waligii ka qayb galin meel wax lagu dhex-dhexaadinayo xataa dalkiisana ha ahaatee waxay ahayd arin lagu khaldamay, waa midhihii IGAD oo si khaldan loo adeegsaday. Waana sababta ay nabad uga dhalan la’dahay South Sudan ilaa maanta.”
Wuxuu yidhi Wasiirka Warfaafinta; Jenenka ayaa u qalma hawshan, isaguuna ahaa ninkii wadahadalsiiyay M/weyne Al Bashir iyo John Garang oo soo afjaray dagaalkii ka socday Koonfurta Sudan.
“Arintaa ayaan ka codsanaynaa dawladaha Gobolka gaar ahaan xukuumadda Kenya. Kenya waa udub-dhexaadka waxkasta oo ka socda gobolkan. Waa halkan meesha ay hawshanada ka soconayso.” ayuu yidhi Wasiirka Warfaafinta.
Wuxuu wasiirka aad u daleeceeyay xaaladda siday u wado Itobiya isagoo yidhi; ” Waxaan doonaynaa wax maslaxad u ah shacabkeena ee ma doonayno in mushkiladda dalkanaga loo adeegsado dana gaar ah.”
Itobiya inay dagaalada ka socda gobolka ay qayb ka tahay oo aanay doonaynin inay xasilooni ka dhalato Somaliya gaar ahaan waa arin lawada ogsoonyahay. Waxayna inta badan ku fulisaa danaheeda ururka goboleedka loo yaqaano IGAD oo noqday wakaalad ay ku fulaiso Itobiya ajendayaasha ay ka leedahay gobolka, gaar ahaan Somaliya. Waxaan jeebka ugu jira 3ex kaar marka ay noqotay in loo codeeyo bayaan ama mashruuca laga soo saaro IGAD, taasoo ka dhigan inay haysato 50% codka ururka ay ku meelmariso waxay doonto.